Somaliland : Go'aan laga soo saaray hogaaminta UCID - BBC Somali
Somaliland : Go'aan laga soo saaray hogaaminta UCID
21 Luulyo 2016
Image caption Jamal Cali Xuseen ayaa doonaya inuu sku sharaxo madaxweynenimada isaga oo aan ahayn gudoomiyaha xisbiga UCID.
Magaalada Hargaysa, gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisbiyada Somaliland ayaa maanta ku dhawaaqay go'aamada dacwada khilaafka labada garab ee xisbiga mucaaridka ah ee UCID.
Gudidu waxay xukumeen in labada garab ee is khilaafsan ee muranku ka dhexeeyo ee ay kala hogaamiyaan gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe iyo musharaxa Jamaal Cali Xuseen ay qabsadaan shirweyne aan caadi ahayn ee xisbiga UCID muddo 45 maalmood gudahooda ah.
Waxay kaloo gudidu xukumeen in shirweynahaasi ay wada maamulaan labada garab.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee UCID Faysal Cali Waraabe, ayaa markiiba BBC u sheegay in gudidaasi aanay awood u lahayn shirweynaha xisbiga ee la raacaayo xeerarka xisbiga UCID, hase-yeeshe gudoomiye ku xigeenka 3-aad ee xisibiga UCID Cali Maxamed Yuusuf, oo u hadlay garabka kale ayaa soo dhoweeyay go'aamada gudiga diiwaangelinta ururada siyaasada Somaliland.
Gudoomiyaha xisbiga Faysal Cali Waraabe, ayaa horay uga qaaday xilkii xisbiga UCID masuuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiye xigeenka 3aad Cali Maxamed Yuusuf, iyo murashaxa jagada madaxweynaha Jamaal Cali Xuseen, oo uu yiri murashax ma aha, taasoo ay diideen iyaguna.